Apple ၏ နည်းပညာ များ ၊ ပစ္စည်းအသွင်အပြင်များကို ကူးယူသုံးစွဲခဲ့သည်ဆိုသော Apple နှင့် Samsung ပစ္စည်းများနှိုင်းယှဉ်ချက် – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Published On: Sun, Aug 26th, 2012 ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘုိုင်းဖုန်းဆုိုင်ရာသတင်းများ | By သက်နိုင်စိုး Apple ၏ နည်းပညာ များ ၊ ပစ္စည်းအသွင်အပြင်များကို ကူးယူသုံးစွဲခဲ့သည်ဆိုသော Apple နှင့် Samsung ပစ္စည်းများနှိုင်းယှဉ်ချက်
Tags ShareSamsung ကုမ္ပဏီဟာ Apple ကုမ္ပဏီနည်းပညာပစ္စည်းများ ၊ Apple ကုမ္ပဏီရဲ့မူပိုင် နည်းပညာတစ်ချို့ကိုကူးယူသုံးစွဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ Samsung ကုမ္ပဏီအားတရားစွဲခဲ့ရာ Samsung ကုမ္ပဏီ တရားရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုများအတွက် Apple ကုမ္ပဏီထံသို့ဒဏ်ကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၀၅ ဘီလီယံ ပေးဆောင်ရန် Samsung ကုမ္ပဏီ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပါတယ်။ အခု ဖော်ပြမှာကတော့ Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ Product များနဲ့ပုံစံတူထုတ်လုပ်ထားတယ် ၊ Apple ရဲ့နည်းပညာတစ်ချို့ကိုသုံးစွဲထားတယ်လို့ Apple ကစွပ်စွဲထားတဲ့ Samsung ပစ္စည်းများ နဲ့ Apple ပစ္စည်းများကိုပုံနှင့်တကွ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
4. Maps app interface design (blatantly ripped-off)
5. App Store icons ဒီဇိုင်းကို Samsung Show Room တွင်ယူသုံးထားပုံ
6. Apple Retail Store နှင့် Samsung Show Room
7. iPhone 4/4S design
9. Macbook Air design
11: iPad box design:
12: Microphone app design:
13: Camera connection kit:
14. iPad software keyboard ဒီဇိုင်းနှင့် Samsung Software keyboard ဒီဇိုင်း
15. iPhone ရဲ့ Message style နှင့် Samsung Galaxy ဖုန်းများ၏ Message style
16. iPad accessories များနှင့် Samsung Galaxy Tablet များ၏ accessories
17. iPhone ဘက်ထရီအားသွင်းခေါင်း နှင့် Samsung Galaxy ဖုန်း/Tablet ဘက်ထရီအားသွင်းခေါင်း
18. iDevice များ၏ USB ကြိုး နှင့် Samsung Galaxy ဖုန်း/Tablet များ၏ USB ကြိုး
19. Apple ၏ Siri နှင့် Samsung ၏ S-Voice
၁၅၀၀ တန်ဖုန်းများအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်ပါက ဖုန်းနံပါတ် ၃၄၅၆ သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်